Wild Digi Ani
မြန်မာစာတန်းထိုး Power Rangers ကားကောင်းများ ကို စုံလင်စွာ ကြည်ရှုနိုင်ပါသည်။
Hellraiser2Hellbound (1988) (WDA)
Story Line : IMDB: 6.5/10 A psychiatric prison in-charge unleashesabunch of pain-seeking demons while meddling withasatanic puzzle cube. As the demons begin to harass his daughter, she must findaway to solve the puzzle.
Release On : 12/23/1988
Genres : Horror |
your product here xx
Download Link 1(Mega)
Download Link 2(One Drive)
Download And Watch On Facebook
WDA Channel (Wild Digi Ani) Hellraiser 2: Hellbound (1988) ဇာတ်ကားကို တင်ပေးလိုက်ပါတယ်...
ပထမ ကားမှာ ခရစ္စတီနဲ့ သူ့ကောင်လေးဟာ သူမ အဖေ အိမ်ကြီးကနေ လွတ်အောင် ပြေးနိုင်ခဲ့ပေမယ့် ခရစ္စတီက စိတ္တဇဆေးရုံကို ရောက်ရှိသွားခဲ့ပါတယ်... သေတ္တာအကြောင်း သူမ ပြောဆိုချက်များကို မည်သူမျှ ယုံကြည့်ခဲ့ခြင်း မရှိသည့်အတွက် စိတ်မနှံ့သူ အဖြစ် အများက သတ်မှတ်ထားခြင်း ခံထားရပါတယ်... ခရစ္စတီဟာ ငရဲက သူ့အဖေ ခေါ်သံတွေကို ကြားရပြီး သေတ္တာကို တစ်ဖန် ပြန်ဖွင့်ချင်ကာ သူမအဖေကို ကယ်တင်ချင်နေခဲ့ပါတယ်...
စိတ္တဇဆေးရုံက ဆရာဝန်ကြီးကလည်း သေတ္တာရဲ့ လျှို့ဝှက်ချက်ကို တိတ်တစိတ်အဖြေရှာနေသူဖြစ်ပါတယ်... အဆိုပါ ဆရာဝန်ကြီးဟာ ခရစ္စတီရဲ့ မိထွေး ဂျူလီယာ ကို ပြန်လည် အသက်ရှင်စေခဲ့ပါတယ်...
စိတ္တဇဆေးရုံးမှာ အံစာတုံးသေတ္တာရဲ့ ပဟေဠိ တွေကို အဖြေရှာတွေ့နေခဲ့တဲ့ ကောင်မလေး တစ်ဖနီ ရှိပါတယ်...
ခရစ္စတီနဲ့ တစ်ဖနီ ပေါင်းပြီး ငရဲက ခရစ္စတီရဲ့ အဖေကို ကယ်တင်နိုင်မလား... ဂျူလီယာနဲ့ ဆရာဝန်ကြီးကလည်း ဘယ်လိုတွေ နှောက်ယှက်မှာလဲ... ငရဲထိန်းတွေကလည်း ဘယ်လိုတွေ ပါဝင်ပတ်သတ်ကြမှာလဲ ဆိုတာ ဇာတ်လမ်းထဲမှာ ကြည့်ရှုလိုက်ကြပါ...
Hellraiser ကားတွေက အစဉ်လိုက် အများကြီး ဆက်ထွက်ထားပါတယ်...
1987 – Hellraiser I
WDA Channel မှ အခါအခွင့်သင့်သလို Hellraiser ကားတွေကို တင်ဆက်ပေးသွားပါမည်...
Genre: Horror, Scary
Subtitle: Myanmar Subtitle
Translated by Sai Tho Han Soe
Encoded by Swam Yee
?rel=0&showinfo=0&color=white&iv_load_policy=3" frameborder="0" allowfullscreen>
Boruto - N